Accueil Ny Mpitandrina Toriteny Toriteny 25/12/2018
Efa tao anatin’ny fitantarana ny famoronana izao tontolo izao, no nahariana voalohany ny hazavana teo anivon’ny aizina sy ny korontana. Ny tenin’Andriamanitra no nanatanterahina ny famoronana, ary namerina izany ny filazantsaran’I Jaona. Hoy ny and 3: “Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza”. Mamorona izao tontolo izao ny tenin’Andriamanitra, mampisy ny fiainana, ary mitondra ny fitiavany manontolo ho an’ny olona. Ampifandraisan’ny evanjelistra Jaona amin’ny andininy vitsivitsy ny famoronana sy ny Krismasy. Satria, na dia tsy misy fihinanam-bilona, tsy misy fianakaviana masina, tsy misy tranon’omby, tsy misy mpiandry ondry aza tao amin’ny tantara rentsika, dia misy kosa ny fahaterahan’ny zanak’Andriamanitra. Hoy ny and 14: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, feno fahasoavana sy fahamarinana; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray.”
Tsy mitantara izay niseho tamin’iny hariva iny tao Betlehema ny filazantsaran’I Jaona, satria heveriny ho efa fantatry ny kristiana izany. Kanefa manazava izy hoe: “Inona no dikan’izany?” (Ny dikan’ilay niseho tao Betlehema). Tao amin’ny fahaterahan’I Jesosy tamin’ny fomba tsotra no miafina ny fisehoan-javatra lehibe iray dia ny fahatongavan’ny Zanak’Andriamanitra.Tamin’ny fomba manaitra no nilazan’IJaona evanjelistra fa ny Zanak’Andriamanitra dia tsy iza fa ny tenin’Andriamanitra. Miteny amintsika amin’ny alalan’ny fisian’io zaza io, amin’ny alalan’io zazalahy io, amin’ny alalan’io olona io Andriamanitra.
Milaza amintsika ny tenin’Andriamanitra hoe iza moa Andriamanitra ary inona no tiany hampintaina amintsika, inona no tiany hozaraina amintsika. Raha te-hahalala izay tian’Andriamanitra holazaina amintsika isika, dia aoka hitodika amin’I Jesosy. Raha te-hahalala isika hoe iza Andriamanitra, dia aoka isika hifikitra amin’I Jesosy. Tsara kokoa Izy (Jesosy) noho ny lahateny lava, mivantana kokoa noho ny fanazavana feno, mafana sy mora azon’ny rehetra noho ny famelabelaran-kevitra, ilay olona velona, ny fihetsiny, ny asany ary ny teniny dia mampita amintsika izay Andriamanitra. Hoy ny and 18: “Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana: fa nyZanakalahyTokana, Izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no manambara Azy”.
Isika ihany koa dia manana izany fijoroana vavolombelona izany ao amin’ny boky iray, dia ny Baiboly, saingy tsy mamaky izany afa-tsy eo fanatrehan’izay ambarany isika, amin’ny fanatrehan’I Jesoa Kristy, ilay Zanak’Andriamanitra velona.
Tsy te-hitoetra ho zanak’Andriamanitra tokana, Jesoa Kristy, zanak’Andriamanitra, fa te-hiaina ao amin’ny fianakaviamben’ny mpirahalahy sy mpirahavavy na mpianadahy, ary tsy iza ireo rahalahy sy anabavin’I Jesoa Kristy ireo fa isika. Te-hiara-hiaina amintsika Jesosy, te-ho rahalahintsika sy anadahintsika Izy. Ny Krismasy dia fetin’ny zanak’Andriamanitra, eo amin’ny lafiny maha-olombelona. Ary isika miaraka ankehitriny izao no mamorona tranon’omby lehibe handraisana an’I Jesosy.
Fifankatiavana tsy araka ny nofo aman-drà, fa araka ny Fanahy sy ny antso. Fa ity ny vaovao mahafalin’ny Krismasy, ry Havana: izay rehetra mila Azy dia afaka ho tonga zanak’Andriamanitra. Ireo rehetra izay mandray ny Tenin’Andriamanitra ho toy ny hazavana ao amin’ny maizina, dia efa nampidirin’Andriamanitra ao anatin’ny fianakaviamben’ny zanak’Andriamanitra, tonga rahalahy sy anabavin’I Jesoa-Kristy, izay Izy no Zokintsika lahimatoa. Fianakaviana tsy niforona araka ny maha-iray firazanana, na avy amin’ny vahoaka mpiray fihaviana, nampiray foko, fa misokatra ho an’ny olona rehetra. Mba te- ho havany ve ianao?
Andriamanitra mihitsy, ry Havana, no mamorona fianakaviany sy miantso azy avy amin’ny vazan-tany efatra. Anjarantsika ny mandray ny tsirairay izay nantsoiny toy ny ataontsika amin’ny fankalazana ny batisa sy ny fanasan’ny Tompo. Isaorana anie Andriamanitra izay nahary izao tontolo izao tamin’nyTeniny, izay nanome antsika ny fiainana, izay niteny amintsika ao amin’I Jesoa Kristy, amin’ny taona rehetra, izay mamonjy sy miantso antsika. Amena!